Ithuluzi lamahhala le- Google Adwords Isihleli segama elingukhiye
Amathani abantu benza kusesho lwe-Google khona manje
Thola amagama angukhiye alungile
Qala ukuthayipha ukuze uthole angukhiye umhlabeleli. Thola izitayela ezintsha:
Hlunga imiphumela yakho.
Thola amathuba ephelele.
ukuhlunga ukuhlela amathuluzi wethu onamandla ikuvumela intuitively futhi ngokushesha ukuthola amathuba elisemqoka ngabe empeleni anentshisekelo. Nge zonke-in-one elingukhiye Planner yethu ngeke kudingeke yimuphi omunye ithuluzi ukwenza ucwaningo elisemqoka ephelele.
Dala uhlu elisemqoka futhi uthole zokugcina iconsi aphume amandla abo.
Gcina futhi uqoqe amagama akho angukhiye ohlwini ukuze ukwazi ukuwaphatha noma kunini ku- Clever Ads Keyword Planner. Uzokwazi ukudala uhlu olusha kusuka ekuqaleni, ukubuyekeza, futhi ukuhlanganise noma ukudlulisa amagama asemqoka asuka kolunye uhlu aye kolunye.
Sesha amagama angukhiye alungile ibhizinisi lakho
Thola izinkulungwane angukhiye amasha bese uthole imiphumela olunembile okufika ngakho ukugxila angukhiye ngokuthi ngempela. Nguwe olawulayo.
Yakha uhlu olusha noma uqedele uhlu yakho ekhona
Uma usukhethe amagama wakho, uzokwazi ukudala uhlu olusha ngabo noma ukuwafaka e esivele sikhona. Phatha nabo ukudlala nabo njengoba ufuna - bayakhohlwa Excel.
Faka amagama akho angukhiye ngqo kumikhankaso yakho Google Ads
Layisha kalula amagama angukhiye kusuka kuhlu lwakho ukuya kumikhankaso yakho Google Ads zeGoogle ngokuchofoza okukodwa. Thola amagama angukhiye owaphuthele emikhankasweni yakho shazi bese ukhulisa ukusebenza kwakho.
Thola angukhiye amasha kuphi
Clever Ads Keyword Planner yenzelwe ngokukhethekile ukuletha amandla amakhulu kunoma iyiphi idivayisi. Ngakho-ke ungayisebenzisa noma nini nanoma kuphi.
Beat izimbangi nge Isandiso se-Chrome yethu
Dlulisa amehlo esincintisana amasayithi futhi uthole ukuthi yimaphi amagama angukhiye babasiza ukuheha traffic.
Download Isandiso se-Chrome
“Ngithanda kakhulu se-Chrome bajwayela, ngale ndlela ngiyakwazi ihlaziye amawebhusayithi ezifanayo futhi uthole imibono evela angukhiye abawasebenzisayo. Ngiye ngajabulela ukuthi ngiyakwazi thwebula lonke ulwazi ezihlobene angukhiye mahhala ngakho angikwazi ukuba enze izinqumo ezingcono nokuningi unolwazi.”.
“Amagama angukhiye engiwathola ku-Google Keyword Planner imvamisa ajwayelekile kakhulu futhi awachazi kakhulu ... yingakho ngincamela Ithuluzi Lokucwaninga Clever Ads Kunginika imiphumela ephelele njengoba bethola idatha emithonjeni eminingana, futhi futhi angidingi ukuba Google Ads akhawunti yezikhangiso zeGoogle noma ukubhalisa noma kuphi.”
“Lapho nje ngifaka inqwaba yamagama asemqoka engiwatholile Clever Ads , ngibona ukwanda kwe-CTR Google Ads zami ze-Google. Manje njengoba ngibhida amagama asemqoka izithameli zami eziwafunayo, ngayeka ukuchitha imali ngokuheha ithrafikhi esezingeni eliphansi.”
Amagama angukhiye balinde
Amathani abantu athungatha izinsiza zakho kanye nemikhiqizo ku-Google. Asembulele angukhiye basebenzisa.
Okuningi Clever Ads Keyword Planner FREE tool
Hlangana wamavukelambuso zonke-in-one elisemqoka ithuluzi lokucwaninga abakhangisi nabakhangisi. Khuphula isu lakho SEO manje!
Izici nezinzuzo elingukhiye Planner yethu
Ngaleli thuluzi le-SEO, uzoheha abantu abanentshisekelo ngebhizinisi lakho (umkhiqizo noma izinsizakalo) ngokukhomba amagama angukhiye afanele amakhasimende akho angawathayipha empeleni kubha yokusesha yakwaGoogle. I- Clever Ads Keyword Planner yakhelwe ukwedlula umncintiswano ngokwakha amagama angukhiye amade adingwa yibhizinisi lakho ukuze Google Ads zeGoogle iphumelele. Isu elihle le-SEO libalulekile ukuze isiza sakho sisebenze kahle, futhi i-SEO ayilutho ngaphandle kocwaningo lwegama elingukhiye oluhle. Ake sikusize!
Thola imiphumela olunembile & inenzuzo ibhizinisi lakho
Zethu elisemqoka ithuluzi isizukulwane khulula izokubonisa zonke angukhiye olufanele oluhlobene nosesho lwakho bese uvumela ukuhlunga kubo by ukhiye amamethrikhi zokukhangisa kwaku-Google. Uzothola imiphumela olunembile ukwenza izinqumo ezinolwazi futhi ukhethe the best angukhiye kokwenza ngemikhankaso yakho. Ukwenza izinqumo ukumaketha ibhizinisi ngaphandle kokuba kahle ukwaziswa nokuba imiphumela efanele kungaholela ukusebenza ompofu, futhi ngenxa yalokho, yini ukufinyelela izinhloso zethu esikhathini oyifunayo. Nge uhlu elisemqoka Planner yethu elisemqoka ngeke nale nkinga futhi kungcono ngokuphelele free!
Khohlwa ngama- ads Excel nezinkimbinkimbi
Siyazi ukuthi ukuphatha nokuhlaziya idatha emibhalweni emikhulu kungakushiya ukhathele futhi ukhungathekile, futhi kudinga isikhathi esiningi nezinsizakusebenza ezitshaliwe kuyo, zinikeze imiphumela emibi. Ungethuki, silapha ukukusiza! Izikhathi lapho bekufanele ulande amathani wamagama asemqoka ku-Excel spre ads heet bese usebenza kuwo amahora ukuwahlunga nokuwahlela seziphelile. Ukwenza ucwaningo lwamagama asemqoka osezingeni eliphezulu manje kubonga kalula ku- Clever Ads keyword planner tool. Hlela uhlu lwakho lwamagama angukhiye, uwahlanganise, uwahlukanise noma uwaqede ngqo kusuka kuthuluzi lethu. Mahhala. Akukho ukuphrinta okuncane. Ungethuki, silapha ukukusiza!
SEO KANYE UKUKHANGISA ezihamba
Qalisa nosizo abantu ukuthi bakuthole
Lungiselela yakho imikhankaso-PPC (pay ngakunye) bese bavula ROI yakho (Buyisela Of Investment) kanye yokuthengisa ngokukhomba angukhiye olufanele amakhasimende akho ekufuna futhi ukuthi kakade kungasebenzi kahle izimbangi zakho. Ungaphuthelwa ithuba olulodwa lapho enza ucwaningo akho angukhiye.
Clever Ads siphinde sikunikeze imininingwane engachemile ngokuthola amagama abalulekile emithonjeni eminingana yedatha, hhayi kuGoogle kuphela. Idatha ye-Google Keyword Planner ivame ukubekelwa eceleni, futhi sithuthukise ithuluzi lethu lokukhiqiza amagama angukhiye ukuze ukwazi ukwenza ucwaningo lwamagama angukhiye kangcono futhi wenze izinqumo ezihlakaniphile zamasu akho wokuthenga akhokhelwayo.
Qala ukukhangisa zisuka
Ngethuluzi le- Clever Ads Keyword Planner awukwazi ukuphatha amagama akho angukhiye nohlu lwamagama angukhiye endaweni eyodwa okwenza kube lula futhi kube lula! Ungazilayisha futhi kumikhankaso yakho Google Ads kanye namaqembu ezikhangiso ngqo kusuka ku- Clever Ads - konke endaweni eyodwa! Isikhathi siyimali futhi sifuna ukuthi uzonge zombili ngokusebenzisa ithuluzi lethu elingukhiye lokusika.
Kumele-do elisemqoka nokwenza
Khumbula ukuthi SEO okuhamba phambili ithiphu wukuthi kumele ngezikhathi ezithize hlola ukusebenza amagama wakho ukuzivumelanisa ukuziphendukela kwaso, stop angukhiye egculisayo ngoba abazi nentshisekelo ibhizinisi lakho, futhi avivinye angukhiye amasha ezingase ukwandisa ukusebenza umkhankaso wakho. Njalo unake Amathrendi elisemqoka! ukuhlolwa elingukhiye kuyisihluthulelo futhi sizobe qiniseka ukukukhumbuza ukuvuselela amagama wakho ukugwema ukuchitha imali ngokungadingekile angukhiye ezingasebenzi ngendlela egculisayo. Nge Planner yethu elisemqoka ngeke miss into.
Siyakwamukela ikusasa ucwaningo elisemqoka futhi SEO ngokunemba
Okuhlangenwe nakho kwethu ekwakheni nasekusebenziseni Google Ads ezinkampanini ezingaphezu kuka-150,000 kusisiza ukuba sazi ukuthi yini ebaluleke kakhulu kuwe lapho ukhetha amagama angukhiye afanele ebhizinisi lakho. Siyakwazi okudingayo! Nge- Clever Ads Keyword Planner, ukucwaninga kwamagama asemqoka kuzoshesha futhi kube lula, futhi ungabuya njalo ukuzobuyekeza futhi uphathe uhlu lwakho lwamagama angukhiye. I-SEO yakho izothola ukuthuthuka, kanjalo nezinhloso zebhizinisi lakho.
Futhi, sifuna ufunde kule nqubo, futhi njengoNdunankulu we-Google Partners, sinomhlane wakho futhi sethembisa ukuthi uzothola okuhle kakhulu kubuchwepheshe bethu. Ngeke nje uthole igama eliyisihluthulelo nethuluzi le-SEO, kepha uzosebenzisana naye ebugebengwini, ongeke akunikeze kuphela amagama awukhiye owafunayo, kepha futhi nezinsizakusebenza nolwazi oludingayo ukuze ube Google Ads zeGoogle uwedwa. Ibhizinisi lakho lizowubona umehluko!
Zonke-in-one elisemqoka Planner
Yenza ucwaningo lwegama elingukhiye kusuka ekuqaleni kuze kube sekugcineni ngaphandle kokushiya Clever Ads Kulula kanjalo nje! Kusuka ekufakeni igama elingukhiye noma i-URL (ukuhlola amagama angukhiye wokwenza izimbangi zakho akusikho ukukopela! Kungenye nje iqhinga!) Ukufaka iziphakamiso zamagama angukhiye ozikhethele zona Google Ads zeGoogle. Konke kusuka endaweni efanayo, ngaphandle kokushintsha amathuluzi noma amaphaneli wokulawula. Futhi kumahhala! Unquma!
Ukusebenzisa Clever Ads elingukhiye Generation Ithuluzi kanye namanye amathuluzi wethu, ungathola kwikhasi lewebhusayithi lethu, ngeke ukukhulisa yakho Google Ads imiphumela kanye nokwandisa ukuzinikezela nokubhapathizwa kwakho isabelomali. Ukuthengisa kwakho nemiphumela izothuthuka kakhulu ... Kungani uthuthukise amagama akho angukhiye lapho ungabuye uthuthukise yonke imikhankaso nge- Google Ads Audit yethu yamahhala edala izikhangiso Google Ads nemikhankaso emisha yezikhangiso zeGoogle ngokuchofoza nje okumbalwa? Phatha wonke Google Ads zeGoogle kusuka endaweni eyodwa futhi unganqandeki ngezikhangiso Clever Ads . Phakathi kwamanye amathuluzi wethu ngeke uthole kuphela i-audit kanye negama elingukhiye, kepha futhi noMdali Womkhankaso, uMdali weBanner wemikhankaso yakho yokubonisa, uhlelo lokusebenza lweselula lapho ungabuka futhi uhlaziye wonke amamethrikhi wakho, nokuhlanganiswa okuhlukahlukene namathuluzi afana ne- Slack , Microsoft Teams noma i- Google Chat . Zithole zonke futhi wenze imikhankaso yezikhangiso zakho ze-Google inganqandeki!
Sizokucela ukuthi ungene ngemvume ku-akhawunti yakho Google Ads ukudala uhlu lwakho lwamagama angukhiye, ngale ndlela uzohlala ukhululekile ukubuya futhi uphathe uhlu lwakho lwamagama angukhiye ocwaningo. Sibheka ubumfihlo bedatha ngokungathi sína futhi siqoqa kuphela esikudingayo ukukunikeza ulwazi oluhle kakhulu.